विप्लवको एजेण्डा के हुन्, न जनतालाई थाहा छ, न सरकारलाई - www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
विप्लवको एजेण्डा के हुन्, न जनतालाई थाहा छ, न सरकारलाई
चैत २८ गते, २०७५ - १७:१९
पहिलो कुरा त राजनीतिक एजेण्डासहित कुनैपनि राजनीतिक पार्टी या समुहले आफ्नो विचारहरु राख्ने अगाडि आउने अधिकार संविधानमा सुरक्षित छ । नेपालको संविधानले प्रष्टै भनेको छ, ‘जुनसुकै विचार आस्थाको भए पनि कसैलाई प्रतिबन्ध लगाउन, थुनछेक गर्न पाईने छैन ।’ आफ्नो विचारहरु स्वतन्त्रतापूर्वक अभिव्यक्त गर्ने अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अर्कोतिर देशको अमनचयनमा खलल पुर्याउने, आतंक मच्चाउने, उर्गवादी गतिविधिहरु गर्ने, विस्फोटनहरु गर्ने, शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउने, दबाब सिर्जना गर्ने, त्रास पैदा गर्ने जस्ता गतिविधि गर्ने जोकोही व्यक्ति वा समुहलाई सरकारले कानून अनुसार कारबाही गर्ने त्यसलाई रोकथाम गर्ने व्यवस्था पनि छ ।
तरपनि निकास के भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । जुनसुकै आस्था वा विचार राख्ने समुहसँग राज्यले वार्ता र संवादको माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने हल गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । फेरि सम्बन्धित पक्ष वार्ताको टेबलमा आउनलाई पनि तयार हुनुपर्छ । जस्तोसुकै अनि जत्रोसुकै आन्दोलन या विद्रोहको निष्कर्ष भनेको वार्ता र संवाद नै हो । त्यसकारण संवादको टेबलमा विप्लव जी आउनुको विकल्प छैन् । वार्ताको टेबलमा बसेर आफ्नो एजेण्डा राख्ने र जनताले बुझ्ने भाषामा एजेण्डाहरु प्रस्तुत गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।
यहाँ सिके राउतको विषय पनि उठ्छ । उनी चरम अवस्थामा गएर राष्ट्र नै विखण्डन गर्ने स्थितिमा थिए । उनी समेतको शक्ति समुह वार्ता र संवादको माध्यमबाट राजनीतिक मुलधारमा आउन तयार भएको छ । विप्लव जी पनि यसैगरि आउनु पर्छ । सिके राउतको त एजेण्डा स्पष्ट थियो, विखण्डन ! देशलाई टुक्र्याउँछु भन्ने थियो । सरकार, पार्टी अनि जनता विप्लव जीकाे एजेण्डा के हुन भन्ने बारेमा अन्यौलमा छन् । विप्लव जीहरुको एजेण्डा के हुन् ? स्पष्टै छैन् । उहाँले आफ्नो एजेण्डाहरु यि हुन् भनेर सरकारलाई माग राख्नु पर्यो । जस्तो हामीले जनयुद्ध सुरु गर्नुभन्दा पहिले २०५२ मा ४० बुँदे मागपत्र सरकारलाई दिएका थियौं । हामीले सरकारसँग भनेका थियौं, मागपत्र पुरा नभए हामी जनयुद्धमा जान्छौ ।
हामीले लुकीछिपि होइन खुला रुपमा आक्रमण गर्छौं भनेका थियौं । तर विप्लव जीहरुको अहिलेको अवस्था एनसेलको टावरहरु भत्काउने, चन्दा उठाउने, धम्क्याउने तर जनतासँग एजेण्डा स्पष्ट नपारेको अवस्था छ । राज्यलाई पनि आफ्नो एजेण्डाबारे स्पष्ट नपार्ने, वार्ताको टेबलमा आएर आफ्ना एजेण्डा पनि नराख्ने, छलफल पनि नगर्ने र आन्तरिक रुपमा गतिविधि गरेको कारण अन्यौल बढेको हाे । आफ्नो थितिलाई स्पष्ट बनाउनको निम्ति विप्लव जीहरुले आफ्नो राजनीतिक पोजिसन केहो, माग केहो, उद्देश्य केहो स्पष्ट पार्नु पर्यो । स्पष्ट भयो भने जनताको बीचमा समर्थन पनि प्राप्त हुन्छ । त्यसो भएन भने राज्यले कानून विपरितका गतिविधि सञ्चालन गर्ने समुहलाई त्यहि रुपमा राखेर व्यवहार गर्नुपर्ने बाध्यता पर्छ । त्यसकारण उहाँहरु क्लियर रुपमा अगाडि आउनु पर्छ ।
ठुला-ठुला युद्ध गरेका देशमा त वार्ता र संवाद हुन्छ । यहाँ संवाद नहुने भन्ने हुँदैन । हामी प्रारम्भिक चरणमै छौं । फेरिपनि मुख्य कुरा, विप्लवजीहरुले आफ्ना एजेण्डा संसारलाई स्पष्ट रुपमा राख्नु पर्छ । वार्ताको टेबलमा आउनुपर्छ । हाम्रो माग यो हो, यतिसमय भित्र पुरा गर । यति समय भित्र पुरा गरेनौं भने हामी यो प्रकृतिको आन्दोलन गर्छौं भनेर आउँदा राम्रो हुन्छ । त्यो तरिका भनेको राजनीतिक तरिका हो । अहिले विप्लव जीहरुले गरेको गतिविधिहरु अराजनीतिक खालका देखिएका छन् ।
(शर्मा नेकपाका केन्द्रिय सदस्य हुन्)
चैत २८ गते, २०७५ - १७:१९ मा प्रकाशित